May 28, 2018 By Buzz Myanmar News in အချစ်ဆိုင်ရာ, အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ Tags: မိန်းမ, လင်, ပြသနာ
ကိုယ့်လင်ယောက်ျားတွေကို ပြုစုအားပေးချင်တဲ့ မိန်းမ တွေအတွက် ဒီမှာ ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ အပြုအမူလေးတွေကို ရေးပြပါမယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြုစုအားပေးချင်ရင်တော့ အချိန်ပေးပြီး သူ့အကြောင်း လေ့လာရမှာပါ။ ကျွန်တော့်ကို ပျော်စေတဲ့ အရာ ၇ ခုကို နမူနာအနေနဲ့ ရေးပြပါမယ်။
၁. ကိုယ့်ဘာသာ ဂရုစိုက် ပါ
မိန်းမ တော်တော်များများဟာ လင် တွေ သားတွေကို ဂရုစိုက်ရလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ဂရုစိုက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အရင် ဂရုစိုက်တာဟာ တကိုယ်ကောင်းဆန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ လှပနေခြင်းနဲ့ သူများတွေကို လေးစားပေးတာပါ။
၃. ကျွန်တော့်ကို သူမရဲ့ ဟီးရိုး တစ်ယောက်လို ခံစားမိစေခြင်း
ကျွန်တော့် မိန်းမ က ကျွန်တော့် ကို လေးစား အားကိုးတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်တာဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ခံစားမှု တစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်က သူမအတွက် ဟီးရိုး ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း သူမက သူမ မဖွင့်နိုင်တဲ့ ဘူးတွေ ကျွန်တော့်ဆီ ယူလာပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဖွင့်ပေးလိုက်ရင် ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်က သူမရဲ့ သူရဲကောင်းပါ တဲ့။ အဲဒီ လို ပြောခံရရင် ကျွန်တော် အရမ်း စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ ဘဝရဲ့ အသေးစိတ်လေးတွေမှာ သူရဲကောင်းဆန်တာလေးတွေ ရှာဖွေကြည့်ပါ။
၅. ယောက်ျားပီသခြင်းရဲ့ ရှေးစံနှူန်ျးတွကို နှစ်ယောက်လုံး စွန့်လွှတ်ပါ
၆. ယောက်ျား ပီသမှုဟာ ပြသနာ မရှိပါဘူး
ယောက်ျားတွေ ပျော်ရင် အိမ်ထောင် တစ်ခုလုံး ပျော်မှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပျော်ရင်၊ အချစ်ခံရရင် ကျွန်တော်တို့ကလဲ ပြန်ချစ်မှာ မို့လို့ပါပဲ။ လုပ်ရခက်ပေမယ့် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ပြန်ရမှာပါ။
Credit : mmgentleman